सातौं दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास) – RabinsXP Blog
बिहान नीला बिउ“झि“दा कोठामा निकै उज्यालो पसिसकेको थियो । बिहानको घाम पनि निकै चर्को भएको थियो, बाक्लो पर्दा पनि छिचोलेर कोठामा घाम पसेको थियो । आÏनै बिछ्यौना नियाल्न पुगे नीलाका ऑखा । बिछ्यौनाको आभास सुतेको भाग रित्तो थियो । ऊ कुन बेला उठ््यो ? नीलालाई पत्तो भएन । “मेरी रानी † बिहान पनि बित्न लाग्यो” बिहे गरेको दोस्रो दिनको बिहान नीलाका ओठमा चुम्बन गरेर आभासले उसको निद्रा बिउ“झाएको घटनाको मृदु स्मृति भएर आयो उसलाई ।
त्यसै बेला उसका आ“खा पलङको सिरानीमा भएको घडीमा परे≤ सानो का“टाले आठको अङ्क पनि नाघिसकेको थियो । “आज अड्ढिस नजानुप¥यो” नीलाभित्र त्यसै त्यसै आलस्यले जरा गाड््यो । पलङकै टेबुलमा भएको टेलिड्ढोनबाट नीलाले आÏनो इन्चार्ज रघुजीलाई जानकारी गराई । भोलि पनि नआउने कुरा गरेपछि उनले सोमबारको निधो मागे । नीलाले सोमबार पक्का अड्ढिस आउने निर्णय दिई । त्यसपछि नीलाले आपूm निक्कै फुर्सदिलो भएको अनुभूति गरी ।
“आभास के गर्दै होला ?” मनले प्रश्न गरेपछि नीला अनायास कोठाको बगै“चापट्टि खुल्ने झ्यालमा पुगेकी थिई । पर्दा उघार्नासाथ नीलाका आ“खा आभासका ढाडमा गएर ठोक्किए । आभास उसको बिरालोस“ग तन्मय भएको थियो । आभासको बगै“चा पनि रमाइलो थियो । ड्ढागुन महिनाको अन्तिमतिर काठमाडौ“का बगै“चामा बहार आउ“छ । पुस र माघको चिसो याममा कठ्याङ्ग्रिएका बोटबिरुवाहरू ड्ढागुनको न्यानो पाउनासाथ रमाएर आङ तन्काउन थाल्छन् । त्यसैले बिहानको घाम तापेर पूmलबारीको आनन्द लि“दा एउटा स्वर्गीय अनुभूति हुने गर्छ । तर यो आनन्दको अनुभूति भन्ने कुरा पनि मनको खुसी र दुःखस“ग गा“सिएको हु“दो रहेछ । मान्छेको मनमा वैराग्यको बोलबाला भएका बेला जस्तोसुकै रमाइलोले पनि आनन्द सञ्चार गर्न सक्तो रहेनछ ।
आज पनि आभासको पूmलबारीमा आउ“दै गरेको बहारले नीलालाई कुनै आनन्दको अनुभूति गराउन सकेन । बिरालोस“ग तन्मयता गा“सेको आभासलाई देखेर कसोकसो डा“को छोडेर रू“रू“ जस्तो लाग्यो नीलालाई ।
पर्दा उघारे पनि धेरै बेरसम्म पूmलबारीको दृश्य उसले हेरिरहन सकिन । नीलाभित्र पूmलबारीको हावास“गस“गै नमीठोपन पनि प्रवेश गरिसकेको थियो ।
गलेको शरीरको भारी उसले पुनः आÏनो बिछ्यौनामा बिसाई ।
“नीलु † तिमीलाई ढीलो भएन आज ?” हस्याङड्ढस्याङ गर्दै आभास कोठामा आएको थियो । “नीलु † मिल्छ भने आज एक दिनको बिदा लेऊ न≤ तिमी र म आज कतै घुम्न जानुपर्छ ।” आभासले अ“गालामा राखेर यसो भन्नेछ भन्ने अपेक्षाले तुरुन्तै गा“जेको थियो नीलालाई । “नीलु † के तिमीलाई सन्चो भएन ?” प्रत्यक्षतः आभासले नीलाको निधार छामेको थियो । नीला भने आ“खा चिम्लिएर सुति नै रहेकी थिई । “मैले आज अड्ढिस बिदा लिएकी छु” नीलाले आ“खा चिम्लिएर नै जवाड्ढ दिएकी थिई । आ“खा खोलेर आभासको अनुहार हेर्ने मोह पनि पटक्कै भएन उसलाई । “तिमी फ्रेस हुने होइन ? म जाऊ“ बाथरुम ?” आभासले नीलास“ग अनुमति लि“दा नलि“दै शौचालयतड्र्ढ प्रवेश गरेको थियो । आभास शौचालयबाट निवृत्त भएर निस्क“दा पनि नीला भने बिछ्यौनामा उही अवस्था र गतिमा थिई ।
“नीलु † तिमी पनि फ्रेस भएर आइहाल, भोक लागेको छ ब्रेकड्ढास्ट खाइहाल्नुपर्छ । मिलनलाई दूध खुवाउन मङ्गलेलाई म अह्राउ“छु ।” आभास नीलास“ग बोल्दानबोल्दै कोठाबाट बाहिरिएको थियो । आभास बाहिर निस्किएपछि पनि धेरैबेर नीलाले आभास त्यही बाटोबाट ड्ढर्कने आशामा त्यतै हेरिरही । “मेरी नीलु † तिमीविनाको यो बिहान ज्यादै निरस बित्यो । बिन्ती, अब अबेर नगर≤ आज हामी साथै रमाउने ।” आभास ड्ढर्केर आउनेछ र नीलाका गाला, ओठ, निधार र यत्रतत्र चुम्बन गरेर आÏनो भरखरै मात्र नुहाएको केशको चिसोपनले नीलालाई ताजा पार्नेछ । नीलाले चाह“दानचाह“दै पनि ड्ढेरि पनि यस्तो कल्पना गरी । तर यसपालि पनि उसको कल्पना कल्पनाकै घेराभित्र मात्र र≈यो । अर्थात् त्यसो हु“दै भएन≤ ऊ आएन, आउ“दै आएन ।
“रानीसाहेब, राजाले बे्रकड्ढास्ट खाइस्यो रे † हजुर नुहाएर ब्रेकड्ढास्ट खान गइस्यो रे † राजा मिलनलाई लिएर डाक्टर देखाउन गैस्यो भन्दिनू भनिस्या’छ ।” सुरेशले कोठाको ढोकैबाट समाचार सुनाएर ड्ढर्केको थियो । त्यो केटो तुरुन्त आएर तुरुन्तै ड्ढर्केको पनि थियो ।
ऊ गइसकेको भए तापनि उसले बोलेको आवाजको तरङ्ग भने नीलाका कानभित्रबाट मनको कुनै कुन्तरमा पसिसकेको थियो । आशाको ससानो त्यान्द्रो पनि चु“डिएको मनस्थितिमा नीला बिछ्यौनाबाट जुरुक्क उठेकी थिई । लक्ष्यविहीन हुन खोजेका उसका पाइलाहरू शौचालयतड्र्ढ लागेका थिए ।
सुरेश त्यसपछि पनि ब्रेकड्ढास्टको निम्तो गर्न आएको थियो । एकैचोटि भात खाने सूचना दिएर नीला बिछ्यौनामै ढल्केकी थिई । नुहाइधुवाइ सकेर केहीबेर ध्यानमा बस्ने आÏनो आदतअनुसार आज पनि ऊ ध्यानमा बसेकी थिई । तर मनस्थितिमा आ“धीबेहरी दौडिरहेकाले उसको ध्यान पटक्कै एकत्रित हुन सकेको थिएन । केहीबेरको असड्ढल प्रयत्नपछि उसले आपूmलाई ध्यानको आडम्बरमा बा“ध्न उपयुक्त पनि ठानिन ।
“तिमी सुखी भएको हेर्न चाहन्छु, मम्मी, तिमी सुखी हुनुपर्छ ।” स्मृतिले भनेका शब्दहरू नीलाका मनभित्र आइरहे ।
“के म आभासस“ग सुखी हुन सक्छु ?” नीलाले पहिलोपल्ट आपूmले आड्ढै“स“ग प्रश्न गरी । यो प्रश्नको उत्तर नीलाको अन्तर्मनले उसलाई दिन सकेन । प्रश्नलाई आड्ढै“भित्र खेलाएर सम्भावित उत्तरहरू खोज्नमा नीलाको मनस्थिति प्रयत्नरत र≈यो ।
“रानीसाहेब, भुजा ज्यूनार गर्न सवारी होस् अरे † राजा डाइनिङ रुममा होइसिन्छ ।” पुनः सुरेश नै निम्तो बोकेर आएको थियो ।
“हेर न, मिलनलाई तागतको औषधि लेखिदेऊ भनेर डाक्टर दत्तकहा“ लगेको थिए“ । उसले लेखी त दियो तर त्यो औषधि कतै पाइएन । अब भात खानेबित्तिकै म पाटन र भक्तपुरका औषधि पसलमा यो औषधि खोज्न जान्छु । तिमी मस“ग जाने हो ?” नीला डाइनिङ टेबुलमा पुग्नासाथजसो आभासले भनेको थियो । “होइन म आज कतै नजाने, आज आराम गरेर बस्छु ।” नीलाले आभासको अनुहारमा नहेरी भनेकी थिई । दलबहादुर दाइले खानाका विशेष परिकारहरूले टेबल सजाएका थिए । नीलाले नाममात्रैको खाना आÏनो थालमा हालेकी थिई । आभासले उसको सधै“को मात्राअनुसारको खाद्यपदार्थ आÏनो थालमा भरेर खान पनि थालिसकेको थियो ।
“किन र रानीसाहेब, हजुरलाई मैले तयार गरेको खानेकुरा मीठो लागेन कि ? किन होला नारायणघाटबाट ड्ढर्केर आइबक्सेपछि हजुरले मन लगाएर भुजा ज्यूनार गरिबक्सेकै छैन । केही उचनीच भएको भए क्षमा पाऊ“ । हजुरको रुचिको जानकारी पाए त्यसैअनुरूपको भान्सा तयार गर्ने थिए“ ।” दलबहादुर दाइले अत्यन्तै विनम्रतासाथ नीलाबारेको आÏनो अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका थिए ।
दलबहादुर दाइले नीलाका बारे उल्लेख गरेका कुराहरू अर्थात् विगत चार दिनदेखि उसले खाना खाने कुरामा रुचि नलिएको कुरा सत्य थियो । आपूmलाई माया गरेर, आÏनाबारे चासो राखेर दलबहादुर दाइले कुरा मात्र गरिदि“दा ती कुराले नीलाका अन्तरमनको कुनै कोमल मांसपेशी बेस्सरी दुखेको थियो । “होइन दाइ, त्यस्तो केही होइन≤ तपाईंले तयार गर्नुभएको खानामा कुनै दोष छैन । मलाई नै खानमा रुचि नभएको मात्रै हो ।” नीलाले भित्रभित्रै झन्नै पग्लन खोज्दै भनेकी थिई । “शरीर बिसन्चो भयो कि ? डाक्टरस“ग जा“च पो गराउनुपर्छ कि ?” दलबहादुर दाइले थप आत्मीयता प्रकट गरेका थिए ।
“होइन, त्यस्तो बिसन्चो पनि केही छैन ।” नीलाले टार्न खोजेर भनेकी थिई ।
दलबहादुर दाइको नीलाप्रतिको स्नेहपूर्ण व्यवहारले नीलालाई भाववि≈वल पारेको थियो । “आभासले मलाई यही कुरा भनेको भए ? उसले पनि मैले खाएनखाएको विचार गरेको भए ?” दलबहादुर दाइले गरेको मायालु खोजीनीतिले नीलालाई पुनः आभासप्रति उपेक्षित पारेको थियो । प्रत्यक्षतः आभासले दलबहादुर दाइले नीलास“ग गरेका कुराकानीस“ग पनि कुनै सरोकार राखेको थिएन । खानाको स्वादमा डुबेर ऊ एकनास खाइरहेको थियो । “हि“ड, आजै डाक्टरलाई देखाइहाल्नुपर्छ, यस्तो कुरामा बेवास्ता गर्नै हुन्न ।” बिहे गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नीलाले दा“त दुख्यो भन्नासाथ आभासले नीलालाई तुरुन्तै दा“तको डाक्टरकहा“ पु¥याएको घटना नीलाले सम्झन पुगी ।
“मिलनले मलाई मेरो जिन्दगीको रमाइलो पुनः ड्ढर्काइदिएको छ नीलु † मलाई मिलनलाई भेटेको दिनदेखि यो संसार रमाइलो लागेको छ । मनमतीस“ग म यसरी नै रमाएको थिए“ । रूपाको दुष्टताले गर्दा उसलाई मस“ग छुट्ट्याइदिई । त्यसैले मिलनलाई म एकैछिन पनि आÏनो आ“खाबाट ओझेल पार्न चाहन्न । कसले कुन बेला के गर्छ, त्यो निरीह जीवले केही बुझ्दैन ।” आभासले खाइसकेपछि उनीहरू दुवै बिरालाको कोठाको ढोका अगाडि पुगेका थिए । “हेर न, हिजोआज त यसले पनि मलाई कस्तो पछ्याउ“छ ।” बिरालाको कोठामा प्रवेश गरेको आभासलाई देख्नासाथ सुतिरहेको मिलन म्याउ“ गर्दै आभासको खुट्टामा आएर लुटपुटिएको थियो । “मिलु †” आभासले खुट्टाको बिरालोलाई भावविभोर हु“दै दुई हातले उचालेर छातीमा टा“सेको थियो ।
आभासको यस्तो प्रसन्नतालाई नीलाले भने धेरैबेरसम्म हेर्न सकेकी थिइन । “म कोठामा गए“ है †” नीलाले आभासलाई जानकारी दिएकी थिई तर उसको प्रतिक्रिया सुन्न त्यहा“ पर्खेकी भने थिइन ।
“म आभासस“ग सुखी हुन सक्छु ?” आÏनो बिछ्यौनामा ढल्कनासाथ नीलाभित्रजागृत प्रश्नले उसलाई पुनः गिजोल्न लागेको थियो । “आभास र मेराबीच आएको बिरालोलाई म स्वीकार्न सकु“ला ? आभासले मलाईभन्दा बिरालोलाई माया गर्छ । मिलनस“ग टा“स्सिएको आभासलाई मैले स्वीकार गर्न पनि त सकिरहेकी छैन ।” अनगिन्ती तर्कवितर्कले नीलालाई पछ्याइरहे ।
“म के गरू“ ? यो जीवन र हिजोको मेरो जीवन मेरा लागि कुन राम्रो ? यसरी दिनरात छटपटिएर बा“च्नु राम्रो हो अथवा एकातिर लागेर शान्त भएर बा“च्नु राम्रो हो ? के म आभासलाई तिमी बिरालो र ममध्ये एकलाई रोज भन्न सक्छु ? बिरालोस“गको मेरो प्रतिशोधले आभासका लागि म र रूपाबीच के भिन्नता होला र ? जब म आभासस“ग गा“सिएको उसको बिरालो सहन सक्तिन“ भने आभासले पनि रूपाको पुनरावृत्ति सहन सक्तैन ।” नीलाले आड्ढै“स“ग प्रश्न पनि गरेकी थिई र आड्ढै“ले उत्तर पनि पहिल्याएकी थिई ।
“मलाई आभासको धनसम्पत्तिको आडम्बरी सुख चाहिएको हो या आभासको सम्पूर्ण माया ? अब म के आभासस“ग बिरालोलाई हैन मलाई माया गर भनेर मायाको भीख मागू“ ? अप्रत्याशित आभासले मेरो झोली भरिदियो भने पनि त्यस्तो मागेको मायाले के म तृप्त हुन सकु“ला ?”
“आभासले मलाई जसरी स्वीकारेको छ यही रूपमा सधै“ स्वीकारिरहला । तर के म आभासलाई यही रूपमा स्वीकार्न सक्छु ? सामाजिक धाकरवाड्ढका लागि यदि मैले आभासस“गको मन नपर्दो सम्बन्ध स्वीकारिरहे“ भने पनि म आÏनै लागि रमाएर बा“च्न सकु“ला ?”
“मैले अब आभासस“ग छुट्टिनुपर्छ । मैले आभासस“ग कानुनी बिहे नगरेकाले कानुनी पारपाचुके गर्नु पनि आवश्यक छैन । मैले आभासस“ग छुट्टिनुको कारण कसैलाई भन्न पनि सक्तिन“ । मैले भने“ भने पनि कसैलाई बुझाउन सक्तिन“ । जतिले मैले आभासस“ग बिहे गरेको थाहा पाएका छन्, आभासस“ग अलग्गि“दा तिनीहरूका दृष्टिमा म हास्यास्पद हुनेछु । आभासस“ग छुट्टिएपछि दर्पणस“गको सम्बन्धका लागि पनि मानिसहरूले मलाई नै दोषी ठह¥याउनेछन् । त्यो लाञ्छना भोग्नका लागि पनि मैले आपूmलाई तयार राख्नुपर्छ किनभने म अहिलेको यो पीडाबाट मुक्ति खोज्दै छु ।”
वर्तमानस“गको उन्मुक्तिका लागि आÏनै विचारहरूका जन्जालमा जेलिएको आÏनो अस्तित्वरक्षामा नीला तैनाथ थिई ।
“म अरूका आ“खाले शङ्कास्पद र केही घृणाकै छाया“भित्र देखिउ“ला पनि तर आपूm आÏनै नजरमा भने चोखो हुनेछु । अब म आभासस“ग बस्नु भनेको आभासप्रतिको छल हो र म आड्ढै“स“ग पनि यो छल मात्रै हुनेछ ।” नीला आपूm आड्ढै“स“ग कुरा गरेर केही दह्रो पनि भई ।
त्यसै बेला ड्ढोनको घण्टीले उसको एकान्त भङ्ग गरेको थियो । “त्यहा“ नीलाजी हुनुहुन्छ होला ?” ड्ढोनमा उतापट्टिबाट कुनै पुरुषस्वर आएको थियो । “म बोल्दै छु, यहा“ को बोल्नुभयो ?” अपरिचित आवाजस“ग नीलाले परिचय मागेकी थिई । “हजुर म रामजी शर्मा, हजुरले मस“ग घर किन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । अहिले दुईचारओटा Ïल्याटहरू बिक्रीमा भएकाले हजुरस“ग सम्पर्क राखेको ।” त्यस मानिसले आÏनो परिचय र उद्देश्य पनि भनेको थियो । उसले परिचय दि“दा नदि“दै नीलाका सम्झनामा आएको थियो≤ ऊ घरजग्गा बिक्रीवितरण गर्ने दलाल थियो । ड्ढोन हातमा लिएर उसलाई के भनू“को मनस्थितिमा नीला अलमल्ल परिरही । “आज हजुरलाई फुर्सत भए” उताबाट रामजीको आवाज आएको थियो । “घरहरू राम्रा राम्रा छन्, भनेजस्तो घर भन्नेबित्तिकै पाइ“दैन । अहिले भेटिएको बेला, मैले हजुरको अड्ढिसमा ड्ढोन गरेर यो नम्बर पत्ता लगाएको हजुर † हजुरलाई रोजाएर मात्रै अरूलाई देखाउ“छु हजुर † त्यसैले हजुर आजै ¬” रामजी आत्मीयताका साथ बोलिरहेको थियो । उसको व्यावसायिक आत्मीयता पनि यसबेला नीलालाई मन परेको थियो ।
“तपाईंलाई कहा“ भेट्ने ?” नीलाले अनायास सोधेकी थिई । “हजुर बल्खुको चोकमा आइपुग्नुस् ठीक एक बजे≤ अहिले पौने बाह्र बजेको छ ।” उसले भनेको थियो । नीलाले पनि उसले भनेको समय ठह¥याउन घडी हेरेकी थिई । “हुन्छ, म आइपुग्छु” नीलाले निर्णय पनि दिएकी थिई । त्यसपछि नीला तयार भएर त्यहा“बाट फुर्तिलो चालमा निस्किएकी थिई ।
“नीलु † अड्ढिस नजाने भनेको होइन ?” सा“झ नीला घर ड्ढर्केपछि आभासले सोधेको थियो । धेरै दिनपछि आभासको दृष्टि नीलालाई परिचितजस्तो लागेको थियो । तर नीलाले यस कुरामा पटक्कै ध्यानै दिइन । “हेर न, म त दिनभरि मिलनको औषधि खोज्दाखोज्दा हैरान भए“ । दत्तलाई भेट्न पनि दुईपल्ट उसको अस्पतालमा पुगे“ । बल्लतल्ल भेटेर औषधिको नाम ड्ढेरेपछि किनेर ल्याए“ ।” आÏनो प्रश्नको नीलाबाट जवाड्ढ सुन्नुभन्दा पहिले नै आभासले आÏनो बेहोरा प्रस्तुत गरेको थियो । नीलाले कुनै रुचि नभए पनि आभासका कुराहरू सुनिरही, अथवा सुन्नुको बहाना गरिरही ।
“म साथीकहा“ गएकी थिए“ ।” आपूmले आजै घर किनेर दर्तापास पनि गरेर आएको सा“चो कुरा आभासलाई सुनाउन मनै लागेन नीलालाई । त्यसैले आभासस“गको सङ्गतमा नै पहिलोपटक भूmटो बोलेकी थिई नीलाले । यसरी आभासस“ग भूmटो बोलेको क्षण उसभित्र धेरै दिनपछि अर्कै किसिमको आनन्दको लहरले सरर छोएर गएको थियो ।
त्यस बेलुकी पनि सधै“झै“ उनीहरू खाना खाएपछि छुट्टिएका थिए । नीला सुत्ने कोठातिर लागी, आभास बिरालो बोकेर बैठककोठातिर लाग्यो । “तिमीलाई छिट्टै निद्रा लाग्छ, म मिलनलाई औषधि खुवाएर मात्र आउ“छु” छुट्टिने बेलामा आभासले नीलाको ढाडमा धाप मार्दै भनेको थियो ।
“आभास मेरो होइन, हुन पनि सक्तैन । ऊ बिरालाको हो र उसलाई मैले बिरालोबाट खोस्नु पनि हु“दैन ।” सुत्ने कोठामा पस्दापस्दै नीलाको मनले ठहर गरेको थियो ।
त्यस रात पनि नीलाको निद्रित अवस्थामै सधै“झै“ आभासले आÏनो आवश्यकता पूरा गरेको थियो । “नीलु † म तिमीलाई माया गर्छु, धेरै नै माया गर्छु ।” बितेका रातहरूमा झै“ यो वाक्य आभासले त्यस रात पनि दोहो¥याएको थियो । बितेका रातमा यही वाक्यले नीलालाई केही क्षणका लागि भए पनि अभिभूत पार्ने गथ्र्यो । ऊ त्यस क्षणको उन्मादमा दिनभरिको आभासको पराईपन बिर्सिने गर्थी । तर त्यस रात भने आभासको वाक्यले नीलालाई कुनै स्पर्श गर्न सकेन । किनकिन नीलालाई त्यसबेला आभासस“ग प्रतिप्रश्न गर्न मन लाग्यो । “म र मिलनमध्ये कसलाई धेरै माया गर्छौ ?” नीलाले सोधेकी थिई । आभासले के जवाड्ढ दिन्छ भन्ने कुरा पनि नीलालाई थाहा नभएको होइन तर पनि त्यस बेला उसलाई सोध्नै मन लागेको थियो । “उसलाई पनि माया गर्छु । तिमीलाई मैले भनेको होइन, बिरालो मेरो प्रिय जीव हो । म बिरालोलाई अति नै मन पराउ“छु । अहिले मलाई लाग्छ मिलनविना म बा“च्न पनि सक्तिन होला नीलु ?” भन्दाभन्दै आभासको आवाजमा तरलताले छोएको थियो । तर नीलालाई त्यस बेला आभासको तरलता पनि नदी किनारको बालुवाजस्तो लागेको थियो ।
कताकता दुखेजस्तो भए पनि आभासको जवाड्ढ सुनेपछि नीलाले आपूmलाई कुनै असर नपरेको जस्तो गरेर आभासस“ग अपरिचित हुन खोजी ।
“आभास †” नीलाले बिस्तारै बोलाउ“दा आभास पूर्ववत् आश्वस्त थियो र आनन्दको पौडीमा निदाउन लागेको थियो । “आभास † भोलिदेखि म आÏनै Ïल्याटमा ड्ढर्कंदै छु । आज दिउ“सो म आÏनो Ïल्याट किन्न गएकी थिए“ ।” आभासको रमाइलोमा सायद वज्रपात भएको थियो ।
“किन नीला तिमीलाई यहा“ के भयो ? के मैले कुनै गल्ती गरे“ ? त्यस्तो कुरो नगर नीला † मलाई छोडेर नजाऊ । म तिमीलाई असाध्य माया गर्छु ।” आभासले ड्ढरक्क ड्ढर्केर नीलालाई आÏनो अ“गालोमा बा“ध्दै भनेको थियो । आभासको एक स्पर्शले नै रोमाञ्चित हुने नीलाका इन्द्रियहरू यस बेला पत्थरका जस्ता भएका थिए ।
“आभास † मानिसलाई बा“च्नका लागि चाहिने सबैभन्दा आवश्यक कुरा मनको सुख रहेछ । मैले तिमीबाट मनको सुख पाउन सकिन“ । माया त म पनि तिमीलाई नै गर्छु, तर खोइ म तिमीस“ग खुसी हुन सकिन“ र खुसी भएको बहाना बनाएर म तिमीलाई झुक्याउन पनि सक्तिन“≤ अझ आपूmलाई त सक्तै सक्तिन“ ।” नीलाले एकदमै हतारहतार भनेकी थिई ।
त्यसपछि उनीहरूबीच कुनै संवाद भएन । त्यस रात आभास कतिखेर निदायो नीलालाई थाहा भएन तर नीला भने अनिद्रालाई लत्याएर अघि बढेकी थिई ।
“तिमी आÏनो निर्णय ड्ढिर्ता गर्न सक्तिनौ ?” त्यस बिहान आभासले नीलास“ग आग्रहका स्वरमा भनेको थियो । “आभास † तिमी मेरो जीवनमा आएका एकजना असल मित्र हौ । हाम्रो सम्बन्धले मित्रताको रेखाभन्दा अघि बढ्नु हु“दैनथ्यो । गल्तीलाई जबर्जस्ती अ“गालेर कसैको जीवन पनि कुण्ठित हुनुहु“दैन । हामी दुवैको आआÏनो जीवन आआÏना लागि उत्तिकै महइभ्वपूर्ण छ । तिमीस“ग बिहे गर्नुको भूल सच्याएर अब म तिमीस“ग छुट्टिएर बा“च्न चाहन्छु । आभास मलाई लाग्छ हामी दुवैको वैवाहिक जीवनबाट हामी दुवैले एकअर्कालाई मुक्त गर्नुमै हामी दुवैको कल्याण छ ।” नीलाले उसको र आभासको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आÏनो निर्णय सुनाएकी थिई ।
“मैले तिमीबाट यस्तो अपेक्षा गरेको थिइन“, नीला †” आभासको अन्तिम स्वर थाकेको थियो । “मैले पनि तिमीबाट यस्तो अपेक्षा कहा“ गरेकी थिए“ र ?” नीलाले आभासलाई त्यसबेला मनमनै मात्र जवाड्ढ दिएकी थिई । प्रत्यक्षतः नीलाले आभासलाई केही पनि भनेकी थिइन, मात्रै हेरिरहेकी थिई अनौठो दृष्टिले । यत्तिका दिन आÏनो भएको आभास त्यस क्षण नीलालाई एकदमै पराई लागेको थियो । चिनेको मान्छेजस्तो तर मन नपराएको मान्छेजस्तो । आÏनोजस्तो तर आÏनो हु“दाहु“दै बिरानो भइसकेको मान्छेजस्तो । कस्तोकस्तो ठम्याउन पनि सकिन उसले र त्यसपछि हेरिरहन पनि सकिन आभासलाई ।
सूत्र जानेर पनि मिल्न नसकेको हिसाबजस्तै भएको थियो उनीहरूको दाम्पत्यजीवन । किन र कसरी अनि के भयो ? आभासले चाल पाउन पनि सकेन ।
आभासको ड्राइभर हेमराजले नीलालाई उसको नया“ Ïल्याटमा पु¥याइदिएको थियो ।
आभास र नीलाको दाम्पत्यको प्रण त्यसपछि सकिएको थियो तर जीवन सकिएको थिएन ।
Next story नारीचुली (२०१७ सालसम्म जन्मेका नारीस्रष्टाको जीवनी)
Previous story छैटौं दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास)